ငြိမ်းချမ်းရေးဘလေ့ာဂ်: OKRSO ကရင့်ရိုးရာချည်ဖြူဖွဲ့ ပွဲတော် ကျင်းပပြီးစီးခြင်း
ကေအန်ယူ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်မည် (ရုပ်သံ)
တပ်မဟာ ၄မှ ၆၂နှစ်ပြည့် ကရင့်တော်လှန်ရေးနေ့ မှတ်တမ်း ရုပ်သံ
အနာဂတ်မှာ ကရင်ပြည်သူများအတွက် အသိပညာရှင်နှင့် အတတ်ပညာရှင်တို့၏ ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်။ ကိုယ့်ပြည်သူပြည်သားတွေ ဒုက္ခရောက်နေကြတာကို မြင်ရဲ့သားနဲ့ နိုင်ငံတကာကိုရောက်နေပြီး ကိုယ်ထမင်းဝယုံနဲ့ ကိုယ့်ပြည်သူပြည်သားတွေကို မေ့ပြစ်ဖို့ မသင့်ပါ။ ထင်းခွေပြီး ထမင်းချက်စားနေရတဲ့ဘဝကို.....
သင်သည်ကရင်လူမျိုးမှန်လျှင် ကရင်ပြဿနာ ကရင့်အရေးကိုခေါင်းရှောင်ဖို့ရန်ဝန်မလေးနှင့် ။ ကိုယ့်ကိုမထိရင် ကိုနဲ့မဆိုင် အေးအေးနေမယ်ဆိုရင် သင့်ကိုမျိုးချစ်ကရင်ဟုမဆိုနိုင်။ ကိုးရီယားကားကြည့် ဘီယာလေးမူး ဘောလုံးပွဲလေးလောင်း ကိုယ့်ဝမ်းစာလေးပဲရှာပြီး ချောင်သလို့ဘဲနေမယ်ဆိုရင် မကြာခင် ကရင်တွေဝါးမျိုခံရလိမ့််မယ်။
အဆိပ်မဲ့သစ်ပင် အို-----အသင်သစ်ပင် သင်ဟာ တို့တမျိုးသားလုံးအတွက် နားခိုရာ မရှိမဖြစ်တဲ့ အရိပ်သစ်ပင် အသင်ရဲ့ သက်တမ်းကား အိုမင်းရင့်ရော်ကာ ဆယ်စုနှစ် ခြောက်ဆယ်ပြည့်မြောက်ပြီးဖြစ်လဲ သင်ရဲ့ရွက်ဟောင်းများ ကြွေကျမြေခကျလဲ မပြိုမလဲ ထီးထီးမားမားရပ်တည်နိုင်ဆဲ၊ ................................................ . ချစားနေတဲ့ ပင်စည်နဲ့ သင်ရဲ့ရေသောက်မြစ်တချို့ကြောင့် အသင်မစိမ်းလန်းနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ကျိုးတိုးကျဲတဲ သင့်အရွက်တွေနဲ့ တို့တတွေ အရိပ်ခိုနားခွင့်ရခဲ့ အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေ ရှင်သန်နိုင်ခဲ့။ .................................................. ကိုယ့်ကိုယ်ကို သစ်သားမှန်းမသိတဲ့ သစ် သစ်ချင်းခုတ်တဲ့ ဇါတ်တူပုစိန်ရိုးတွေကြောင့် အသင်ဟာ အင်အားချိနဲ့ခဲ့ရ သင့်အကိုင်းအခက်တချို့အား မက်လုံးပေးပြီး ခုတ်ဖြတ်သွားတဲ့ ကိုင်းဆက်သမားတွေကြောင့် သင်ဟာ ရွက်နုတွေ မဝေဆာနိုင်ခဲ့ ............................................... အသင့်အား သစ္စာဖေါက်ပြားပစ်ခွါသွားပြီး လွင့်စင်သွားတဲ့သင့်ရဲ့မျိုးစေ့တို့သည်လည်း မဟာမျိုးခြားပင်ရဲ့လောင်းရိပ်အောက်မှာ အညှောင့်အစို့လေးတောင် မထောင်ထွက်နိုင် လုံးပါးပါးကာ ကိုယ့်အရိပ်ကိုယ်လန့်နေကြရ တေမိမင်းဝင်စားတဲ့ ငအတွေလို ဆွံ့အနေကြ။ ................................................. သို့သော်----သင်ဟာ ထိုဒဏ်အပေါင်း ခညောင်းရောက်ရှိလဲ ဂရုမမူ လွတ်လပ်ခြင်းလမ်းကို လမ်းပြဆောင်သူ အနာဂတ်မျိုးဆက်ရှင်သန်ရန်အရေး လိုအပ်တဲ့အရိပ်ကောင်း သစ်တပင်အတွက် အဆိပ်မဲ့တဲ့ လောင်းရိပ်တခု ဖန်တီးနိုင်ဖို့ သင်ထာဝရ ရှင်သန်နေရဦးမယ် အို---အသင်သစ်ပင် ........................................ စအိုင်ခန့်(နှင်းခဲမြေ) .......................................
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (1)
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် လူငယ်များ တွေ့ဆုံပွဲရုပ်သံ (1)
: Document (1)
: video (6)
: video မှတ်တမ်း (20)
: နိုင်ငံတကာသတင်း (3)
(ဲပြည်တွင်းမှလာသော သတင်း (4)
(ဲပြည်တွင်းမှလာသော သတင်း) (8)
(၆၄) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ ရုပ်သံမှတ်တမ်း (1)
(Myanmar News Now) (22)
bbc new (12)
BGF လက်နက်ကို DKBA သိမ်းဆည်း (1)
Daw Aung San Suu Kyi's Campaigning Speech on TV (1)
DVB - ရုပ်သံ (2)
DVB new (5)
forward mail မှ (3)
Forword မေလ်းမှ (3)
From DKBA to KKO (1)
irrawaddy new (16)
Karen Historys - (1)
KNU နှင့် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်တို့ ဖားအံတွင် ဆွေးနွေးပွဲစတင် (1)
Letters - (1)
OKRSO နှစ်(၂၀)မြောက်အခမ်းအနားကျင်းပပြီးစီးခြင်း (1)
RFA news (11)
Video မှတ်တမ်း (11)
VOA new (3)
က၇င့်အမျိုးသားနေ့ အတွက် အမှတ်တရ (1)
ကမ္ဘာသိ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့သူ ကရင်တယောက်ရဲ့ အကြောင်း (1)
ကရင့်တော်လှန်ရေးနေ့ ဂုဏ်ပြုတေးသီချင်းများ (1)
ကျမပေးချင်တဲ့ Message (3)
ခိုင်မြဲတည်တံ့သောအစိုးရ (စောဘဦးကြီး) (1)
ချည်ဖြူထုံးဖွဲ့မင်္ဂလာ ရုပ်သံ(စင်ကာပူ) (1)
ငရဲးကိုမကြောက်တပ်ကြဘူးဆိုရင် ဒါတွေကြည့် ကြည့်ပါ (1)
စဝ် ကးကး သာသီ့ဍေ.စူးခါင်. (1)
တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိတယ်ဆိုတာ ဘာကိုပြောနေတာလဲ ကြံ့ဖွံ့စစ်အစိုးရ ... (1)
တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ထောင်ပေါင်းများစွာ ထွက်ပြေး (ရုပ်သံ) (1)
ထုတ် ပြန်ချက် (1)
ထိုင်းရောက်ရွှေပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားများအကြောင်း တစေ့တစောင်း (1)
ဒီမိုကရေဆီနိုင်ငံသစ်ဆီကို သွားနေပါတယ်ဆိုတဲ့ အာဏာရှင (1)
ဒီလိုလေး ခြစ်တတ်ရင် ရပြီ (ရုပ်သံ) (1)
နန့် ဇိုယာဖန်း တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခန်း (ရုပ်သံ) (1)
ပဒို မန်းငြိမ်းမောင် အထူးဧည့်သည်အဖြစ် နေပြည်တော်သို့ သွားရောက် လေ့လာ (1)
ပရဟိတ-ဟောပြောပွဲ ၁ (1)
ပရဟိတ-ဟောပြောပွဲ ၂ (1)
ဗွီဒီယို သတင်း (6)
ဘားမား VJ မီဒီယာမှ (1)
ဘုရားသုံးဆူ တိုက်ပွဲသတင်း (2)
မင်းကိုနိုင် နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်ပြီ (1)
မဆုံတဲ့ ဖူးစာသီချင်း (1)
မန်းရင်စိန် အင်ဒါဗျူး (1)
မဟာဝါဒီကို တော်လှန်သူအားလုံးသို့ဂုဏ်ပြူသောကဗျာ (1)
မုန်တိုင်း သတင်း အထူး သတိပေးချက် (2)
မူးယစ်ဆေးဝါး မလုပ်ဟု ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွေး ပြော (1)
မျက်မှောက်ရေးရာ - သတင်းဖတ်စာ (1)
ရုပ်သံ / (2)
ရုပ်သံ သတင်း (1)
လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ် (မတ်လ ၁၆ ရက် ၂ဝ၁၂) (1)
လျှိဝှတ်ချက် ပေါက်ကြား မှ ကူးယူဖေါ်ပြသည်။ (1)
လူသစ် စိတ်သစ် နှစ်သစ် (1)
ဝ သတင်း (1)
သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း သေတမ်းစာ (1)
သတိထားရန် အသိပေးကြေငြာခြင်း (1)
သမတကြီးထံသို့ မေတ္တာရပ်ခံချက် (1)
သမိုင်းဝင် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလေးတွေပါ။ (1)
သီချင်းတပုဒ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ (1)
အကျဉ်းကျသံဃာများ လွတ်မြောက်ရေး ဆုတောင်းဝတ်ပြု (1)
အလွဲသုံးစားမှုဖြင့် မီးရထားဝန်ထမ်း ၄၄ ဦးကို တာဝန်မှ ရပ်စဲ (1)
အိတ်ဖွင့် ပေးစာ (1)
အနှစ်ခြောက်ဆယ် နှစ်နှစ် ပြည့် ကရင့်တော်လှန်ရေးနေ့သို့ (1)
ဧရာဝတီ သတင်းတိုများ (1)
ီ ရွေးကောက်ပွဲ ကဗျာ (1)
ီ ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းတို (3)
စောဘဦးကြီး ကျဆုံးခဲ့သည့် နေရာ (မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံ) (1)
တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း (ရုပ်သံ) (1)
တောင် ကလေးဆရာတော်ပြောကြားချက် (1)
ဒေါ်စုသားအငယ်ဆုံး ဗီဇာရဗိဒီယိုသတင်း (1)
ဒေါက်တာလှုမြင့်ရရှိသောဘွဲ့ များ (1)
နောက်ဆုံးရ သတင်း (1)
မေလ ပထမပတ် ရုပ်သံသတင်း (1)
မေ့လို့မရတဲ့ ရက်စက်မူတွေ (1)
မောက္ခ ပညာရေး (1)
မောက္ခ ပြည်တွင်းပညာရေးသတင်း (1)
မောက္ခ နိုင်ငံတကာသတင်း (1)
ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းတို (2)
လေးဒေးတိုက်ပွဲရုပ်သံ / (1)
် (ရုပ်သံ) (1)
်(7Day News Journal) (1)
နိုင်ငံတကာ ကရင်အမျိုးသား ကွန်ဖရန့်ဆိုင်ရာ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ (1)
နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရန် KIO မှ မြန်မာအစိုးရသို့ တင်ပြသော စာတမ်း (1)
OKRSO ကရင့်ရိုးရာချည်ဖြူဖွဲ့ ပွဲတော် ကျင်းပပြီးစီးခြင်း
ကရင်သက္ကရာဇ် (၂၇၅၂)ခုနှစ်တွင် ကျရောက်သော ကရင့်ရိုးရာချည်ဖြူဖွဲ့ မင်္ဂလာတော်ကို ထိုင်းအသံလွှင့်ဠာန(Thai PBS)တွင် သြဂုတ်လ (၁၈)ရက်နေ့ နံနက်(၈း၀၀ မှ ညနေ ၄း၀၀အထိ OKRSO မှကြီးမှူးကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ကရင့်ရိုးရာချည်ဖြူဖွဲ့ ပွဲတော်သို့ ထိုင်းနိုင်ငံရောက်OKRSO ကရင်အဖွဲ့ ဝင်များ၊ ကရင်လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများ၊ကရင့်ရိုးရာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ များ ပအိုဝ့်တိုင်းရင်းသားလူငယ်များနှင့် တစ်ခြားသော မျိုးချစ်ကရင်လူငယ်လူထုများ တစ်ထောင်ခန့် တက်ရောက်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါသည်။
ကရင့်ရိုးရာချည်ဖြူဖွဲ့ ပွဲတော် အခမ်းအနားမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများကို အောက်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကရင့်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်စောဘဦးကြီး စောဘဦးကြီး၏သစ္စာလေးရပ် For us surrender is out of question.(လက်နက်ချအညံ့ခံခြင်း အလျှင်းမပြောရ) We shall retain our arm.(ကရင့်လက်နက် ကရင်တွေကိုင်ထားရမယ်) The recognition of Karen State must be complete)(ကရင်ပြည် အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် ပြီးပြည့်စုံရမည်)We shall decide our own political destiny.(ကရင့်ကျမ္မာ ကရင်ဖန်တီးပိုင်ခွင့်ရှိရမည်)။
You are Hero, We love you.
Junta Troops Using Prisoners as Human Minesweepers
ကရင်ပြည်နယ်တွင် တိုက်ပွဲများ ထပ်မံဖြစ်ပွား ရုပ်သံ
Template Design by ငြိမ်းချမ်းရေး ဘလေ့ာဂ် http://karenwantpeace.blogspot.com